10 -ka Xiddig Ee Ugu Lacagta Badan Adduunka | 2021 - Talooyin
Bogga ugu weyn 10 -ka Xiddig Ee Ugu Lacagta Badan Adduunka | 2021
10 -ka Xiddig Ee Ugu Lacagta Badan Adduunka | 2021
Taariikhdeeda dheer iyo sharafta leh ee isboortiga, feerka, oo inta badan loo yaqaan “Sayniska Macaan,” wuxuu soo saaray daqiiqado badan oo xusuus leh. Waa dabiici uun.
Giraanta feerka ayaa caan ku ah soo saarista ciyaartooy geesiyaal ah oo soo bandhiga bandhigyo hal -abuur leh. Sababtoo ah ifka feerka ayaa soo jiray in ka badan qarni, go'aaminta daqiiqadaha ugu fiican taariikhda isboortiga waa mid adag. Si kastaba ha noqotee, waa inaan ku quusinnaa waxa halkan kuu keenaya oo ah 10ka feeryahan ee ugu mushaarka badan 2021.
Warshadaha feerka ayaa kor u kacay oo soo jiitay taageerayaal badan dhowrkii sano ee la soo dhaafay waana wax iska caadi ah in qiimihii saafiga ahaa ee dagaalyahanku uu bilaabay inuu ka fiirsado xaqiiqooyinka.
Haddaba, waa kuwee feeryahannada adduunka ugu mushaharka badan? Jawaabtu waa hoosta.
Sidoo kale akhri: 10ka Maamule Ee Ugu Mushaarka Badan Adduunka
Waa kuwan 10ka ugu sarreeya feeryahannada ugu mushaarka badan adduunka 2021:
Joseph Dennis Parker, oo 29 jir ah, waa feedhyahan xirfad leh wuxuuna ka mid yahay feeryahannada ugu mushaharka badan New Zealand.
Laga soo bilaabo 2016 illaa 2018, wuxuu qabtay xilka WBO horyaal culus, iyo sidoo kale dhowr koob oo culus oo heer gobol ah, oo ay ku jiraan magacyada WBO Oriental, Africa, iyo Oceania, iyo sidoo kale magacyada PABA, OPBF, iyo New Zealand.
Parker wuxuu noqday feeryahankii ugu horreeyay ee miisaanka culus ee ka yimaada New Zealand ama Jasiiradaha Baasifigga ee ku guuleysta horyaal weyn oo adduunka ah ka dib markii uu kaga adkaaday Andy Ruiz suunka WBO ee bannaan.
Sanadkii 2018kii, Joseph Parker wuxuu noqday feeryahanka Australia ugu mushaharka badan, isagoo kasbaday boorso la hubo oo ah $ 3 milyan, iyadoo dakhliga ka soo xarooday Joshua uu sare u kacay ilaa $ 10 milyan (iibka aragtida).
Loolanka, wuxuu haystaa 30% hogaaminta iibka ee aragtida-aragtida. Wax yar ka dib, Parker wuxuu lumiyay dagaal kale oo culus (Dillian Whyte), isagoo kasbaday boorso gaareysa $ 4 milyan-oo lagu daray qeyb ka mid ah dakhliga-aragtida.
Bishii la soo dhaafay, wuxuu ka soo laabtay garaacistiisa toddoba-ilbiriqsi si uu ugu guuleysto horyaalkii miisaanka culus ee WBO Intercontinental, kaasoo uu kaga guuleystay Derek Chisora ​​oo ka dhacay AO Arena ee Manchester, England, May 1, 2021.
Parker wuxuu helay hal milyan oo kiish oo lacag ah oo loogu talagalay dagaalka, laakiin dakhligiisa guud ayaa kordhay ilaa £ 3 milyan sababtuna tahay saamiga iibka ee aragtida.
Micheal Hunter Jr waa feeryahan Mareykan ah. Sannadkii 2017 -kii wuxuu u tartamay horyaalkii miisaanka culus ee WBO. Ugaarsade wiil u noqda feeryahan xirfadle ah Mike Hunter. Wuxuu la dagaallamay horyaalnimadiisii ​​ugu horreysay Abriil 2017.
Hunter wuxuu leeyahay qiyaas lagu qiyaasay $ 3m ilaa 2021. Ilaha ugu horreeya ee qiimihiisu yahay xirfadiisa feerka.
Mushaharkiisa saxda ah ma aha warbixinno cayiman oo sheegaya in dakhligiisu u dhexeeyo $ 100,000 ilaa $ 500,000 halkii dagaalba oo laga yaabo inuu sare u kaco haddii aakhirka, qaabkiisa hadda uu sii socdo.
Micheal Hunter wuxuu hadda ku jiraa kaalinta 7aad ee Ring iyo kaalinta 5aad ee IBF.
Wuxuu ka mid yahay feeryahannada adduunka ugu mushaharka badan.
Oleksandr Usyk waa feeryahan u dhashay Ukraine. Wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee miisaanka culus ee taariikhda qabta dhammaan afarta horyaal ee waaweyn ee adduunka, isagoo xukumi doona horyaalnimada miisaanka culus ee 2018 ilaa 2019.
Usyk wuxuu dhowaan helay kor u qaadista lacagaha dagaalka; isagu hadda ma guulaysan wuxuuna gaadhay kaalinta koowaad ee tartamayaasha WBO Inter-Continental heavyweight title, kaas oo uu ka difaaci doono Derek Chisora.
Lacagta boorsada ee dammaanad-qaadaha ah ee reer Ukraine ayaa xaqiijisay inuu ka heli doono dagaalka 2.5 milyan oo doolar 31-ka Oktoobar, laakiin wax war ah oo ku saabsan inta gunno-arag ah ee uu heli doono lama soo saarin.
Luis Ortiz waa feeryahan xirfadle ah oo u dhashay Cuba. Laga soo bilaabo 2015 illaa 2016, wuxuu haystay horyaalkii miisaanka culus ee WBA, iyo 2018 iyo 2019, wuxuu u tartamay horyaalnimada culus ee WBC laba jeer. Ortiz wuxuu caan ku yahay xirfadihiisa feerka ee xoogga badan, isaga oo ku kasbaday naaneyska "King Kong."
Sida laga soo xigtay majaladda Ring iyo Boxing Transnational labadaba, isagu waa lixaad ee ugu miisaanka culus adduunka ugu firfircoon ilaa Abriil 2021. Tani waxay ka dhigaysaa inuu ka mid noqdo feeryahannada ugu mushaharka badan xilligan.
Sida laga soo xigtay Majaladda Hollywoods, feeryahanka Cuba, oo dhererkiisu yahay 6ft 4in, wuxuu haystaa hanti aad u weyn oo dhan $ 22 milyan illaa Ogosto 2020.
Dagaalkii Ortiz ee Wilder ku dhawaad ​​laba sano ka hor wuxuu ka mid ahaa feedhyahannadii ugu mushaharka badnaa, isagoo wata kiish dhan 1.3 milyan oo doollar iyo $ 2 milyan oo la kordhiyay iyadoo ay ugu wacan tahay bixinta aragti kasta.
Andrés Ruiz Jr. waa feeryahan kale oo ugu mushaarka badan oo ka soo jeeda Mexico-American oo ku tartamaya Mareykanka.
Ruiz waa horyaal hore oo mideysan oo culus, isagoo ka adkaaday Anthony Joshua si uu ugu guuleysto koobabka WBA (Super), IBF, WBC, iyo IBO sannadka 2019. Markuu sidaas sameeyay, wuxuu noqday feeryahankii ugu horreeyay ee ku dhashay Mexico oo ku guuleysta horyaal culus oo adduunka ah.
Ruiz Jr ciyaartiisii ​​ugu macaashka badnayd waa kulankiisii ​​Anthony Anthony. Tani waxay kasbatay ku dhawaad ​​$ 13-14 milyan marka loo eego Forbes halka ciyaartii ugu horreysay uu kasbaday wadar ahaan $ 7 milyan.
Ruiz Jr ayaa dib ugu soo laabtay giraanta bishii hore kadib markii uu guul ka gaaray Arreola oo lagu qabtay Dignity Health Sports Park ee Carson, California.
Mushahar ahaan $ 3.5 milyan, Ruiz Jr wuxuu ahaa feeryahanka ugu mushaarka badan dagaalka (oo ay kujirto gunnada wadaagga PPV).
5. Dilian wyte
Dillian Whyte waa feeryahan xirfadle ah oo u dhashay Boqortooyada Ingiriiska, sidoo kale waa sanduuqii hore ee feerka iyo fanka dagaal ee isku dhafan. The Faraanti Magazine wuxuu ku qiimeeyaa inuu yahay kan shanaad ee ugu miisaanka culus adduunka, BoxRec-na wuxuu ku jiraa kaalinta toddobaad.
Dillian wuxuu kasbaday $ 3 milyan labadiisii ​​ciyaarood ee 2019. Whyte wuxuu kasbaday $ 5.2 milyan hal WBC oo ku -meelgaar ah oo ku -meel -gaar ah oo uu kula dagaallamay Alexander Povetkin 2020.
Xirfadiisii ​​oo dhan, wuxuu kasbaday kaliya feerka guud ahaan in ka badan $ 15 milyan. Tani waxay ka dhigeysaa mid ka mid ah feeryahannada ugu mushaarka badan.
Alexander Povetkin waa feeryahan xirfadle ah oo u dhashay dalka Ruushka oo hadda ku firfircoon ciyaaraha.
Sannadka 2020, feeryahannada/ orodyahannada ugu mushaharka badan Ruushka, oo mushaharkiisu yahay $ 10 milyan, oo ay ku jirto gunno ah ($ 3.5 milyan oo show, $ 6.5 milyan oo ppv ah).
Ka dib markii uu ka adkaaday feeryahankii Ingiriiska (Dillian Whyte) wareegii shanaad, wuxuu noqday horyaalkii cusbaa ee miisaanka culus ee WBC. Warbixin ayaa daaha ka qaaday in qiimaha Alexander Povetkin uu kor u kacay ilaa $ 10m.
Povetkin ayaa hadda lacag badan ka helaya dagaalladiisa; boorsadiisii ​​dammaanad qaadka ugu weyneyd ee xirfadiisa wuxuu ahaa £ 6 milyan oo ka dhan ah Anthony Joshua sanadkii 2018.
Ka dib markii uu ku guuleystay horyaalkii miisaanka culus sanadkii la soo dhaafay, saamigiisii-aragtida-aragtida iyo kala-qaadkii boorsada ayaa kordhay dib-u-ciyaarkii.
Boorsada dagaalka ee soo socota ee Povetkin ee soo socota ayaa shaaca laga qaaday. Povetkin wuxuu qaataa lacag dhan $ 5 milyan oo boorso oo dammaanad ah, oo haddii iibka aragti-bixinta uu ku sii xoogaysto dagaalka, dakhligiisa ayaa kor u kici doona qiyaastii $ 12m.
Deontay Wilder waa feedhyahan culus oo u dhashay dalka Maraykanka. Sannadkii 2015, Deontay wuxuu ku guuleystay horyaalkii miisaanka culus ee WBC, oo uu hayay dhowr sano.
Wuxuu soo afjaray abaar sagaal sano ah oo haysata horyaalkii miisaanka culus ee Mareykanka, abaartii ugu dheerayd taariikhda isboortiga.
$ 2 milyan oo loogu talagalay dagaalkii ugu horreeyay ee Luis Ortiz, $ 10 milyan oo loogu talagalay dagaalka Tyson Fury ee ugu horreeya, $ 10 milyan Dominic Breazeale, $ 20 milyan oo loogu talagalay dib -u -habeynta Luis Ortiz, iyo $ 28 milyan oo loogu talagalay dib -u -habeynta Tyson Fury ayaa ka mid ah maalmaha ugu caansan ee Deontay.
Dakhliga xirfadeed ee Deontay wuxuu ka badan yahay $ 70 milyan haddii dib -u -dhaca Fury ee Febraayo 2020 lagu daro.
Deontay wuxuu kasbaday $ 45 milyan intii u dhexeysay Juun 2019 iyo Juun 2020. Wilder wuxuu ka mid yahay feeryahannada ugu mushaarka badan 2021.
Sidoo kale akhri: 10 Arooska Ugu Qaalisan Aduunka 2021
The 'Gypsy King,' sida loogu jecel yahay adduunka feerka, waa horyaal laba jeer haysta culeyska miisaanka culus. Ka dib markii uu caga -jugleeyay Deontay Wilder bishii Febraayo 2020, wuxuu ku guuleystay cinwaanka WBC.
Tyson Fury waa mid ka mid ah magacyada ugu waaweyn ee feerka, waxaana la filayaa in dakhligiisu uu cirka isku shareero 2021-ka isaga oo isku diyaarinaya ciyaarta aadka loo sugayo ee Anthony Joshua oo soo bixi doonta bisha Ogosto.
Ciyaarta soo socota Tyson Fury ayaa la filayaa inuu kasbado wax ka yar $ 100m oo ay ku jirto gunno-aragti-kasta.
Wuxuu dhacaa inuu noqdo feerka labaad ee ugu mushaarka badan adduunka.
Anthony Joshua waa feeryahan xirfadle ah oo u dhashay Ingiriiska, kaas oo kulankiisii ​​ugu horreeyey u saftay sannadkii 2013 -kii, waxaanu gaadhay heerkii ugu fiicnaa ee feerka adduunka.
Waxaa loo magacaabay majaladda Ring's “Prospect of the Year” sannadka 2014. Waxa kale oo uu ahaa feeryahankii ugu horreeyey ee Ingiriis ah ee lagu daro liiska.
Hadda waa IBF, WBA, WBO, iyo horyaalkii miisaanka culus ee IBO, iyo sidoo kale horyaal laba jeer oo mideysan oo culus.
Joshua wuxuu ka helaa qiyaastii $ 11 milyan heshiisyada ganacsiga. Marka loo eego kuwa jecel Jaguar Land Rover, Beats Electronics, Sky Sports, Farshaxanka Elektiroonigga, iyo Hugo Boss iyo in yar oo kale ayaa ka mid ah sumcadaha badan ee uu la shaqeeyay.
Joshua wuxuu kasbaday qiyaastii $ 125 milyan wadar ahaan dakhligiisa tan iyo 2018, oo ay kujiraan bixinta boorsooyinka, dakhliga PPV, iyo kasbashada oggolaanshaha iyo qaar ka mid ah waxay ka imanayaan dagaalladiisii ​​ugu dambeysay ee ugu dambeysay, is -barbar dhig Andy Ruiz oo kasbaday $ 60 milyan oo doollar.
Laba bilood gudahood, waxaan arki doonnaa isaga oo kasbaday xitaa in ka badan hal kulan ciyaartii bishii Ogosto uu la ciyaaray Tyson Fury. Labada dagaalyahan oo haysta dammaanad 50-50 ah oo ah $ 150m oo Sacuudi Carabiya ah si ay u martigeliso dhacdada oo dakhligu ugu dambayntii wuu kordhayaa gunno iyo aragti-bixin kasta.
Maqaalkani wuxuu taxay 10 -ka ugu sarreeya feeryahannada firfircoon ee ugu mushaharka badan adduunka. Waxaan rajaynaynaa inaad ku raaxaysatay akhrinta.
Kala soco maqaallo kale ThewealthCircle.
15 Akhristayaasha ugu fiican ebook ee 2021 | Hel Maalin walba Waxsoosaar leh
10 Arooska Ugu Qaalisan Aduunka 2021
15 Software -ka Wada -hadalka Tooska ah ee Bilaashka ah 2021 | La shaqee Macaamiishaada Waqti xaadirkan
Shaki kuma jiro in tignoolajiyadu ay horumarisay wax badan oo wada sheekaysiga tooska ahi uu ka mid yahay. Tignoolajiyada…